Ukushumayela NgoBukumkani—Kushunyayelwa Iindaba Ezilungileyo Emhlabeni Wonke | UBukumkani BukaThixo
Ekhohlo: Uvulindlela ongudade uyashumayela eKorea, ngo-1931; ekunene: Ukushumayela ngentetho yezandla eKorea
NAMHLANJE awuphangelanga, kwakusasa ulungiselela ukuya entsimini. Awufuni ncam, kuba ubudinwarha. Ingathi ungasuka nje uziphumlele! Kodwa uyathandaza uze uhambe. Usebenza nodade okhulileyo, yaye ukunyamezela nobubele bakhe buyakukhuthaza. Njengoko nishumayela kwindlu ngendlu, uyakhumbula ukuba abazalwana noodade emhlabeni wonke nabo benza kwalo msebenzi, besebenzisa kwaezi ncwadi uziphetheyo, kwaye baqeqeshwe ngendlela efanayo neyakho. Xa ufika ekhaya, uziva uhlaziyekile. Uva kuthe ngco kuwe ngaphakathi kuba uye waya entsimini!
Eyona nto iphambili ngoku kuBukumkani bukaThixo ngumsebenzi wokushumayela. UYesu watsho kwangaphambili ukuba umsebenzi wokushumayela wawuza kwenzeka ngomkhamo ongazange wabonwa ngaphambili ngemihla yokugqibela. (Mat. 24:14) Siye sazaliseka njani esi siprofeto? Kweli candelo, siza kuthetha ngabantu, iindlela ezisetyenzisiweyo, nezinye izinto eziye zanced’ amaKristu akwazi ukushumayela, nto leyo enceda izigidi zabantu zibone ukuba uBukumkani bukaThixo abuyontsomi.
Kwakutheni ukuze uYesu aqiniseke ukuba wayeza kuba nomkhosi wabantu abashumayelayo ngemihla yokugqibela? Unokubonisa njani ukuba ufuna uBukumkani kuqala?
Funda ngeendlela ezintsha eziye zasetyenziswa ngabantu bakaThixo ukuze bafikelele kubantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka ngeendaba ezilungileyo ngaphambi kokuba isiphelo sifike.
Umsebenzi wethu wokuguqulela ubonisa njani ukuba uKumkani unathi? Ziziphi izibakala ezingeencwadi zethu ezikwenza uthi uBukumkani buyinto yokwenene?
UYesu wafundisa abafundi bakhe izifundo ezibini ezibalulekileyo ngowona msebenzi ubalulekileyo wokuvunwa kwabantu. Ezi zifundo zisiphembelela njani namhlanje?